Xildhibaanno ku eedeeyey Guddoomiye Mursal inuu is-hor-taagi waayey ciidanka la geeyey Baydhaba – Kalfadhi
Warar uu helayo Kalfadhi ayaa sheegaya in xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ay ku eedeeyeen Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan inuu ka jiiftay kaalin uu ka qaadan karay inuuDowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) culeys ku saaro iney ka deyso faragelintala sheego iney ku hayso Dooashada Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Xildhibaannadan ayaa waxay isku deegaan-doorasho yihiin Guddoomiye Mursal, waxaana ka mid ah Guddoomiyayaashii hore ee Golaha Shacabka, Maxamed Cusmaan (Jawaari) iyo Aadan Maxamed Nuur (Madoobe). Eeddooda ayaa timid kadib markii ay shalay Muqdisho ku yeesheen kulan irdaha u xiran, saxaafaddana aan wax war ah laga siin.
Xildhibaan Maxamed Mursal Geelle, oo kulankaas qeyb ka ahaa, ayaa u sheegay Kalfadhi iney Xildhibaannadu iska xog-warreysteen xaaladda Koofur Galbeed, gaar ahaan Doorashada Madaxweynaha Maamulkaas. “Kulanka waxaa looga hadlay doorashada Koofur Galbeed, oo faragelin xoogan lagu haayo” ayuu Xildhibaan Geelle ku yiri Kalfadhi.
Kulanku waxa uu ka dhacay Filla Hargeysa, oo hoy u ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka, isaga ayaana shir-guddoominayey, waxaase dhinacyada ka fadhiyey labada Guddoomiye ee hore (Aadan iyo Jawaari), waxaana eedda la sheegay in Guddoomiye Mursal lagula dhacay kulankaas ay imaaneysaa iyada oo uu horay u diiday ciidan ay dowladdu geysay Baydhabo 29-ka bishii hore, islamarkaasna uu difaacay musharraxnimada Mukhtaar Roobow, oo la rumeysan yahay ineysan DFS la dooneyn inuu u tartamo Jagada Madaxweynaha Koofur Galbeed.